Vatengi Havatengi Kukwana Zvakare | Martech Zone
Vatengi Havatengi Kukwana Zvakare
Mugovera, Nyamavhuvhu 29, 2009 Chishanu, June 12, 2015 Douglas Karr
Imwe yeshanduko dzinoshamisa kwazvo dzandinotenda kuti midhiya enhau yakaunza iko kuparadzwa kwe akakwana muchiso. Hapasisina vatengi vanotarisira kukwana… asi isu tinotarisira kuvimbika, kushandira vatengi, uye kuzadzikiswa kwechero zvivimbiso izvo kambani inoisa tarisiro.
Mumabiko evatengi svondo rapfuura pa Zvishoma nezvishoma Mhinduro, Mutungamiri uye CEO Ron Brumbarger akaudza vatengi vake kuti Bitwise chido vanokanganisa… asi kuti ivo vagare vachiita nepese pavanogona napo kupora zvizere kubva kwavari uye kutarisa zvido zvemutengi. Pakanga paine vatengi vashoma makiyi akakomberedza tafura - uye maitiro aisakwanisa kuve aive netariro. Paive nekubvumirana kwekubatana kwevashandi uye rutsigiro rwakapihwa nevashandi veBitwise.
IMHO, makuru mamaneja mamaki aigara achishandiswa kuita rinoshamisa basa rekuchengetedza brand kukwana nekumira meseji, grafiki, uye neruzhinji hukama. Mazuva iwayo ari mumashure medu izvozvi, zvakadaro, sezvo makambani asingachagone kudzora kana kushandisa vezvenhau uye izvo vatengi nevatengi vari kutaura nezvazvo. Vatengi vako ikozvino vakabata kiyi kune yako brand.
Izvo zvinogona kuratidzika zvinotyisa pakutanga… kambani yako inogona kunge ichitsvanzvadzira kuchengeta yavo akakwana brand mupenyu. Usazvidya moyo nezvazvo. Muchokwadi… zvimise. Uri kuita zvakawanda kukuvadza kukambani yako nekuyedza kuvhara ayo makwapa pane nekuvazivisa iwo pachena. Kambani yega yega ine kusimba uye kushaya simba uye anogara ari mutengi uye mutengi anotarisira kuti matambudziko aitike. Haisi zvikanganiso zvinoitika, ndiyo nzira iyo kambani yako inopora kubva kwavari.
Kunyangwe mukati mechigadzirwa ratings uye ongororo, izvi ndizvo zvazviri. Chikamu che5-nyeredzi chinogona kukuvadza kutengesa kwako pane kuvabatsira. Sezvo ini ndichiverenga zvigadzirwa zvechigadzirwa, ini ndinowanzo famba ndakananga kune zvisina kunaka kuongororwa. Ini handisvetuke kutenga, zvakadaro. Pane kudaro, pakuongorora zvirevo zvisina kunaka, ndinosarudza kana izvo zvisina kusimba zvandinogona kurarama nazvo. Nditengesere rakakura gadget rine rinotyisa zvinyorwa chero zuva! Ini handirave zvigadzirwa zvigadzirwa.
Pandinoona chiyero chenyeredzi shanu, ini ndinowanzosiya ongororo zvachose uye ndotarisa kumwe kunhu. Hapana chakakwana uye ndinoda kuziviswa nezve izvo zvisina kukwana. Ini handitengi kukwana zvakare. Handitendi mukukwana futi. Pane e-commerce mharidzo gore rapfuura, mukuru wemagetsi anogadzira akataura kuti ongororo dzakakwana dzinowanzo kukuvadza zvigadzirwa zvavo. Hapana mumwe munhu anotenda mukukwana, futi.
Zvinogona kutaridzika kunge zvisina musoro, asi ungangoda kushambadza zvaunogona uye kubvuma zvizere kusasimba kwako kana uchida kuwedzera kutengesa, kumisikidza tarisiro, uye kugona kuzvizadzisa. Mutengi anofara haasi mutengi ane chigadzirwa chakakwana… mutengi anofara nekambani yako, mashandisiro avakaita, uye - kupfuura zvese - kupora kwawakaita kubva pane zvaunokanganisa kana kukundikana.
Tags: 5 nyeredziratidziro dzevatengiwongororo dzevatengikuongorora kwevatengiReviewsratings nyeredzi